Gudoomiyihii hore ee degmada Jowhar oo biya diidsan qaabka xilka looga qaaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gudoomiyihii hore ee degmada Jowhar oo biya diidsan qaabka xilka looga qaaday
8th December 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Guddoomiyihii xilka laga qaaday ee degmada Jowhar ee Gobolka Shabeellaha dhexe, Maxamed Cismaan Xaaji Caqiil ayaa kasoo horjeestay xil ka qaadis Wasaarada Arimaha gudaha ay ku sameysay, xilli shalay Magaalada Jowhar uu tagay Agaasimaha Wasaarada Arimaha gudaha, Cali Abtidoon Xalane.
Guddoomiye Caqiil oo Wareysi siiyay Idaacada Risaala ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in uusan aqbali doonin xilka qaadis illaa inta wareegto lagu bedelaayo ka soo baxayso xafiiska Madaxweynaha Jamahuuriyada Federalka Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu amray inaan xilka laga qaadi karin shaqaalaha dowladda Federaalka Soomaaliya, sidaasi awgeedna uusan xilka ka qaadi karin qofna.
Guddoomiyihii Degmada Jowhar Maxamed Amiin Cismaan ayaa sheegay in isbedelka uu ku dhowaaqay Agaasimaha Wasaarada Arrimaha Gudaha ay u keeni karto buuq badan degmada Jowhar. “Degmada Jowhar muddo saddex sano ku dhow ayaan soo maamulayay wax qalqal iyo buuq ah iyo amni darro kama dhicin, balse arrintan waxaan u malaynayaa in buuq badan keeni karto,”.
“In qof xilka laga qaado qof waa wax caadi ah laakiin waxaa la yaab leh in anigoo Jimcihii ka soo laabtay safar shaqo oo aan dalka dibadiisa ugaga maqnaa Wasaarada Arrimaha Gudahana waa ka warqabtay in aan degmada ka maqanahay, ma aha mid caqligal ah in Agaasimaha Wasaarada Arrimaha Gudaha in uu Jowhar tago oo uu ugaga dhowaaqo bedel lagu sameeyay maamulka degmada arrintaasna waxa ay u muuqataa mid laga dhuumanayo wareegtadii ka soo baxday madaxweynaha ee ahaa in wasaaradaha aysan magacaabid iyo bedelidba samayn karin,”ayuu yiri Maxamedamiin Cismaan Xaaji Cabdulle Caqiil.
“Ma jirto wax qoraal ah oo ku saabsan xil ka qaadis oo ay dowlada I soo gaarsiisay, maanta markii aan la xiriiray Wasaarada Arrimaha Gudahana waxa la ii sheegay inaysan ka warqabin safar shaqo oo uu ugaga maqan yahay agaasimaha guud balse uu safar gaar ah u baxay.”ayuu sii raaciyay.
Wareegto ka soo baxday wasaarada arrimaha gudaha ka soo baxday ayaa Guddoomiyaha degmada Jowhar loo magacaabay, Maxamed Cali Muudey.
Muran ayaa ka taagan isbedelkaan Wasaarada Arimaha gudaha ay ku sameysay maamulka Magaalada Jowhar, welina Wasaarada si rasmi ah ugama aysan hadlin arintaasi.
Diyaarad hub sidda oo muran ka abuurtay Nigeria
Uganda: Jaariyad si xun u jirdishay gabar 18 biloood jir ah oo maxkamad lasoo taagay